Lunch အီဒီယံ အသုံးအနှုန်းများ
ဒီတပတ် English American Style ကဏ္ဍမှာ တင်ပြပေးထားတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကတော့afree lunch, power lunch, hand somebody his lunch နဲ့ out to lunch တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတင်ပြပေးမယ့် အီဒီယံအသုံးကafree lunch ဖြစ်ပါတယ်။ A က တခု၊ Free က အလကား၊ အခမဲ့၊ Lunch က နေ့လည်စာ တို့ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အလကားစားရတဲ့ နေ့လည်စာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမေရိကန် ဆိုရင်စကားတခုကို အရင်ဆုံး ရှင်းပြလိုပါတယ်။
အသုံးကတော့ "There is no such thing asafree lunch" ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အလကားကျွေးမဲ့ နေ့လည်စာမျိုး ဘယ်တော့မှ မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ lobbyists ဆက်သွယ်စည်းရုံးဆော်သြော်သူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့က လူစုလူဝေး အုပ်စုရှိကြပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်း အုပ်စုတွေကိုယ်စား သူတို့က အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ချည်းကပ်ပြီးတော့ အကျိုးကိုရှေ့ ရှုဆောင်ရွက်ပေးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က အဲဒီ အစိုးရတာဝန်ခံတွေကို ထမင်းဖိတ်ကျွေး၊ သွားလိုရာခရီးတွေကို အကုန်အကျခံပြီး လိုက်ပို့ပေး၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေလုပ်ပြီး ကျေးဇူးတုန့်ပြန် မျှော်ကိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်အမတ်တဦးအနေနဲ့ ဒီလိုချည်းကပ်လာတာကို ရှောင်ရှားတဲ့ George Crows ပေးတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
"I've never let lobbyists buy me lunch, or do any favour for me. Early in my political career I learned the truth as the old saying there is no such thing asafree lunch."
"ကျနော်အနေနဲ့ လာပြီးစည်းရုံးသူတွေဆီကနေ ဘယ်တော့မှ (ထမင်း) အလကား မစားဘူး။ သူတို့ကိုလည်း ကျနော့်အတွက် ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူး။ ကျနော်နိုင်ငံရေး လုပ်စကတည်းက အလကားစားရတာ ဘယ်မှာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားဟာ သိပ်မှန်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တွေ့ သိခဲ့ရပါတယ်။"
ဒုတိယတင်ပြပေးမဲ့ အီဒီယံမှာ power lunch ဖြစ်ပါတယ်။ Power က စွမ်းအား၊ အာဏာ၊ Lunch က နေ့လည်စာ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားစုတခုလုံးက လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ တန်ခိုးအာဏာရှိသူတို့ရဲ့  နေလည်စာ လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ အရေးပါ၊ တန်ခိုးအာဏာရှိတဲ့ အထက်အရာရှိတွေ အတူတူ စားကြသောက်ကြတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကောင်းပေ့၊ ဈေးကြီးပေ့ ဆိုတဲ့ ပျော်ပွဲစားရုံးတွေမှာ စားကြသောက်ကြတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ အဲဒီမှာ ခေါ်သွားသူ ကော်မတီဖက်က လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ်ဆိုပြီး အကုန်ကျခံတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ကြသူများက အဲဒီမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ George Crows ပေးတဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
"တန်ခိုးထွားသူတွေ လာစားကြတဲ့ဆိုင်တဆိုင်မှာ ကျနော့်ညီက အလုပ်လုပ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဒီလိုစားသောက်သူတွေ ပေးတဲ့ ဘောက်ဆူးငွေတွေ အများကြီးရတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီလူတွေက တဦးရှေ့ တဦး အပြိုင်ကြွားချင်လို့ ပြိုင်ပြီးပေးကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။"
တတိယ အီဒီယံအသုံးကတော့ to hand somebody his lunch ဖြစ်ပါတယ်။ To hand က ဒီနေရာမှာ ကြိယာအဖြစ် အသုံးပြုထားပြီးတော့ လက်ကမ်းပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Somebody က တဦးတယောက်သောသူ၊ က His သူ၏ နဲ့ Lunch နေ့လည်စာ ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်က တစုံတယောက်သောသူကို သူရဲ့ နေ့လည်စာ ကမ်းပေးခြင်းလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အီဒီယံမှာ ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အားကစားပြိုင်ပွဲတခုမှာ ယှဉ်ပြိုင်သူကို အနိုင်ရရှိလိုက်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါတယ်။
ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်ဆောင်လာရခြင်းရဲ့  အကြောင်းတရားကို ဘယ်သူကမှ စဉ်းစားလို့မရနိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားကစားသတင်းထောက်တွေ နဲ့ အားကစားပရိသတ်တွေလောကမှာ ဒီအသုံးက ရေပန်းစားလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမှာ နေ့လည်စားမဟုတ်ပေမဲ့ တဖက်ယှဉ်ပြိုင်ဖက်ကို ဆန်ပြုတ်တိုက်လိုက်ရင် ဆန်ပြုတ် ဆုတ်ပြန်ဆိုပြီး အနိုင်ယူလိုက်နိုင်တဲ့သဘော ပြောတဲ့စကားရှိတာ အများအသိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
"We haven't been able to beat that schoo for more than ten years, but we sure handed them their lunch today. We buried them 35 to 7."
နောက်ဆုံးတင်ပြမဲ့ အီဒီယံအသုံးကတော့ out to lunch ဖြစ်ပါတယ်။ Out က အပြင်မှာ ထွက်နေတာ၊ (to) Lunch က နေ့လည်စာ ဆိုတော့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က နေ့လည်စာ အပြင်ထွက်စားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ သတိမေ့လွယ်တဲ့ အကျင့်ရှိလို့ ဗလုံးဗထွေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် လက်တွေ့ဘဝနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့အခြေအနေကို ရောက်နေတဲ့ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတာကို ဆိုလိုပါတယ်။
"ပြောရမှာတော့ ဝမ်းနည်းပါတယ် ကျနော်တို့ ဥက္ကဌကြီး အနားယူဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အခုရက်တွေအတွင်း မေ့လိုက်တာလည်း လွန်ပါရော။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေဆိုတာ သူလုံးဝ မသိတော့ဘူး။ တကယ်ဆို သူဟာ လက်တွေ့ဘဝနဲ့ ကင်းကွာနေပြီး ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်နေတာ နှစ်နဲ့ချီ ရှိနေပါပြီ။"